Fampahafantarana an’i Bretagne, faritra avaratra andrefan’i Frantsa. Hanakoako etsy amin’ny Alliance Française Andavamamba ny 10 novambra izao ny vazon’ny tatsambo ao anatin’ilay hetsika karakarain’ny fikambanana Trégor Madagascar. Ity farany izay hankalaza ny faha-10 taonany amin’ity …Tohiny
Rima sy Ny Eja : Hiaraka amin’ny « Tiako izy »
Anarana tsizoviana eo amin’ny asa-soratra Malagasy. Hiaraka amin’ny antsan-tononkalo « Tiako izy » i Rima sy Ny Eja. Etsy amin’ny efitrano malalaky ny Tahala Rarihasina Analakely no hantanterahana izany ny 26 sy 27 novambra izao. …Tohiny
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, namaly ny fangatahan’ny Vaomiera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana (Ceni) ny Fanjakana japoney. Araka izany, akoatra ny fanampiana hafa izay efa nentiny, nandefa iraka mpanara-maso ny fifidianana ho Filoham-pirenena, fihodinana …Tohiny
Can 2019 : Tandindomin-doza noho ny hafitsoky ny FMF
Famarinana ny baolina kitra malagasy any an-davaka. Izay no azo ilazana ny “fikafika” sy ny teti-dratsin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra na FMF amin’ny fanakorontanana ny fifidianana federaly eo anivony. Araka ny efa fantatra mantsy, tokony …Tohiny